Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe nchekwa dị 3 nzọụkwụ
5.1 mebiri emebi Micro SD Kaadị r
E nwere ọtụtụ iri puku ndị ọrụ kwa afọ na-ata ahụhụ nke nke faịlụ ọnwụ na maka otu ihe mere e nwere ọtụtụ iri puku mmemme na-mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na nke Steti nke nkà ọrụ na mmekọrita faịlụ ọnwụ na mgbochi ndị a ga-iwere na nke a. Ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe kasị mma omume a họọrọ na nke a na nke a nkuzi e dere iji jide n'aka na a dịghị abụ nke maka ọrụ onye esesịn ahụhụ nsogbu nke faịlụ ọnwụ.
Ngwaọrụ ịrụ data mgbake
Ka e kọwara tupu nakwa na e nwere ọtụtụ iri puku ngwá ọrụ na ego na dị online iji jide n'aka na ọ nke na-kpebiri maka ndị ahịa na ọtụtụ n'ime ndị a na-arụ ọrụ ngwaọrụ na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi mgbe ngwá ọrụ a họọrọ uche na ọ bụghị naanị izute mkpa na achọ nke onye ọrụ kamakwa jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma N'ihi. Iji mee ka echiche kpọmkwem n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ndị ọrụ na ike ga-eji na nke a:
Professional data mgbake ọrụ na-eri ọtụtụ puku dollar na-kpọmkwem.
Wuru na mbụ larịị ngwaọrụ n'ime os.
Data mgbake software omume nke ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma. The n'elu kwuru banyere ndị kasị nkịtị na ọkaibe ụzọ mee ka n'aka na nke nke data mgbake a na ma mgbe chere ihu ma ọ bụ ọ bụrụ na e a ohere mgbe ahụ, ọ na-kpebiri ozugbo o kwere omume. Ịhapụ onye mbụ ndị ọzọ na abụọ nhọrọ ndị ọzọ na-apụtakarị n'ihi na onye ọrụ iji mejuputa na iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka usoro na nke a.
Best ngwọta: naghachi faịlụ site na kaadị ebe nchekwa dị 3 nzọụkwụ
Dị ka isiokwu na-egosi na ọ bụ doro anya na ihe ngwọta kasị mma ma ọ bụrụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nke nke data ọnwụ jidesie ngwaọrụ nke ụdị ọ bụla ma ọ bụ SD kaadị na-kpọmkwem nke a makwaara dị ka kaadị ebe nchekwa. Na nke a Wondershare ọzọ mere a sịkwa na ọ na ka ẹkenam kasị mma na ndị ọkaibe ngwá ọrụ na-mara dị ka ndị Wondershare Data Recovery nke ike-eji na-eme ka n'aka na data mgbake bụ mgbe otu ihe iseokwu na niile. The ke omimi analysis nke ngwá ọrụ na na metụtara pụta bụ ihe na-chugaworo ndị ọrụ crazy na resultantly ngwaahịa a họọrọ elu. Wondershare Data Recovery Na-ahụ na ala nke na nkà na egwu results na-egosipụta na na dị nnọọ ole na ole clicks onye ọrụ ọkọkpọhi data azụ na e furu efu. Ọ na-ahuta ka otu n'ime ndị kasị tụkwasịrị obi omume mgbe ọ na-abịa data mgbake ọkara.
Esonụ bụ ụdị faịlụ na-akwado site na Wondershare Data Recovery software omume na ọ na-akawanye kacha mma n'ihi n'ihi na onye ọrụ nọ na-agbake ọ bụla otu n'ime n'okpuru:
DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, CWK, HTML / HTM, INDD, EPS, wdg
2. Ozi & ozi ịntanetị
PST, DBX, EMLX, wdg
Jpg, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, Raw, wdg
AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, Flv, SWF, mpg, RM / RMVB, wdg
AIF / AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ufọt ufọt / Midi, OGG, AAC, wdg
ZIP, rar, nọdụ, wdg
Akwado ọnọdụ nke usoro ihe omume
Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị data ọnwụ ruru ka nke na-abụghị nanị natara ma usoro ihe omume na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ya apụta mgbe ọ na-abịa ọnyịnye nke data n'ime mmepụta nchekwa dị ka ọtụtụ ndị omume enweghị usoro gbawara n'etiti data nke bụ mgbe ọzọ nke ma n'adịghị ọ bụla dị otú omume ndị Wondershare Data Recovery a haziri iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Olee otú iji Wondershare Data Recovery naghachi faịlụ site na kaadị ebe nchekwa
Nzọụkwụ na na-aka na nke a bụ ndị dị mfe na n'ụzọ kwụ ọtọ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịgbaso n'okpuru kwuru iji mee ka n'aka na data na-abụghị nanị natara ma arụpụta ihe kasị mma na-nwetara na akwanyere ndị software ojiji nakwa:
1. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html nwere na-eji iji jide n'aka na ihe omume ebudatara arụnyere na-agba ọsọ na-ebute usoro nke data mgbake:
2. Mgbe ndị ọzọ button na-enwe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ụdị nke faịlụ a na-ahụ họrọ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe arụmọrụ nke ihe omume a na-enwe:
3. The ọnọdụ na nke nke mere na-na-kpọmkwem na-eme ka n'aka na pin ebe search a mụụrụ ịzọpụta oge nke onye ọrụ nakwa dị ka usoro ego:
4. Ozugbo faịlụ e natara onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ndị a na-ele ya anya ma na-natara dị ka kwa ọchịchọ na mkpa:
Izere faịlụ ọnwụ Atụmatụ
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime Atụmatụ ndị a ga-emejuputa atumatu iji jide n'aka na data ọnwụ bụ gbochie na nke kacha mma n'ụzọ:
1. The ngwaọrụ ekwesịghị-agbanyụrịrị rue data bụ kpam kpam dere jidesie na kaadị ebe nchekwa nke igwefoto.
2. The kaadị ebe nchekwa ekwesịghị-ewepụ ma ọ bụrụ na ihe oyiyi a ka na-esichara dị ka ọ na-akpata na kaadị ebe nchekwa ure na ọtụtụ nke ikpe.
3. Mgbe faịlụ na-depụtaghachiri ka kọmputa na kaadị mgbe a ga-ewepụ site na onye na-agụ ma ọ bụrụ na Iṅomi usoro bụ underway.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site na kaadị ebe nchekwa dị 3 nzọụkwụ